Ø Arovana amin’ny rivotra ny mofo ka fonosina anaty harona na lamba.
Ø Ny mofo mbola tsy notapahina dia voatahiry elaela kokoa ka tsara raha tsy tapahina izany raha tsy efa hihinana . Raha tsy mahalany mofo iray dia tsara raha ireny karazana mofo kely ireny no vidiana. Voatahiry mantsy ny hamandoana ao anatiny raha tsy tapahana ny mofo ka miaro azy tsy ho simba izany.
Ø Azo atao ihany koa ny mampirina ny mofo ao anaty harona plastika ary fonosina tsara. Atao izay tsy hidiran’ny rivotra ao anatiny ary ampidirina anaty vata fampangatsiahana, ao amin’ny faritra mampivaingana azy avy eo. Mialohan’ny hihinana azy dia ampidirina anaty “micro-onde” amin’izay ilay mofo mba hampiala ilay mivaingana.